Weerar lala damacsanaa xarunta ciidamada GSU-da oo la fashiliyay – The Voice of Northeastern Kenya
Weerar lala damacsanaa xarunta ciidamada GSU-da oo la fashiliyay
Ciidamada amaanka ee dalka ayaa gacanta ku dhigay 3 qori oo ah nooca loo yaqaanno AK 47 iyo 178 xabadood oo rasaas ah, kadib markii ay fuliyeen hwolgal lagu bartilmaameedsanayay askari horay uga tirsanaa booliska sida Milatariga u taba baran ee loo yaqaanno GSU-da.
Howlgalkaan oo dhacay saacadihii hore ee saaka ayaa lagu doonayay in lagu soo qabto askariga hore oo la tuhunsanyahay in uu noqday xagjir isla markaana uu qorsheynayay weerar ka dhan ah xarunta dhexe ee ciidamada GSU-da oo ku taalla degmada Ruiru ee ka tirsan maamul goboleedka Kiambu.
Ninka la raadinayay oo heysta tababar aad u sareeya oo ku aadan badbaadinta dadka afduubka loo heysto ayey u suurta gashay in uu saaka ka baxsado ciidanka, in kastoo uu ka tagay hubkii uu weerarka ku fulin rabay.
Ugaarsiga ninkaasi oo la sheegay in uu taageere u ahaa al shabab ayaa la billaabay kadib markii ay dhawaan soo baxeen macluumaad dhinaca sirdooka ah oo ku saabsanaa in weerar lala damacsanyahay xaruinta ciidamada GSU-da.
Diiwaanka booliska ayaa askarigaasi horay uga tirsanaa ciidamada amaanka waxa uu magaciisa ku sheegay Eric Ngethe Kanyingi, waxaana uu shaqada ka tagay sanadkii 2014-ki.
Af hayeenka booliska George Kinoti ayaa xaqiijiyay soo qabshada hubkaasi, waxaana uu sheegay in laamaha amanaka ay hadda klu howlanyihiin sidii ay gacanta ugu soo dhigi lahaayeen ninkaasi oo uu ku tilmaamay dambiile si weyn loo yaqaanno.
Shalay ayey ahayd markii ay ciidamo boolis ah oo ka socday saldhiga Ruiru weerar ku qaadeen aqal uu ninkaasi ka daganaa xaafadda Githurai 45, walow ay halkaas kasoo waayeen isaga.
Sarkaal sare oo ka tirsan laamaha amaanka ee magaalada Kiambu ayaa sheegay in aqalka ay ka heleen oo kaliya waxyaabo muujinaya in askarigaasi hore la baray xagjirnimo.
← Madaxa bangiga dhexe ee Kenya oo baarlamaanka looga yeeray
Burundi oo ku gacan seyrtay ciidamo boolis ah oo ka socda Qaramada Midoobay →